Semalt विशेषज्ञ वेब स्क्र्यापिंग को भविष्यवाणी
नेट स्क्र्यापि नेटबाट डाटा स collection्कलनको लागि सामान्य प्राविधिक हो। यो भनेको केवल महत्त्वपूर्ण हो भन्नाले ठूलो मूल्य घटाउने काम हो। यो केवल अपरिहार्य छ। जानकारी शक्ति हो, र कुनै पनि संगठन जससँग यसको अभाव छ त्यो विकृत छ, त्यसैले वेब स्क्र्यापि the रगत हो जसमा सबै प्रकारका अनलाइन व्यवसायहरू चल्दछन्।
चाहे यो एनजीओ, एक नाफा कमाउने संस्था, एक स्टार्टअप, एक मध्यम उद्यम, वा एक फॉर्च्युन ,०० कम्पनी हो, यो निश्चित रूपमा एकत्रित जानकारीमा चल्छ। त्यसोभए, वेब स्क्र्यापि ofको महत्त्वलाई बढी जोड दिन सकिदैन।
कर्पोरेट संसारमा प्रतिस्पर्धा यो भन्दा पहिले कहिल्यै कडा थियो। बिभिन्न उद्योग भित्रका खेलाडीहरू अब प्रतिस्पर्धा गर्न आफ्नो हतियार भित्र हरेक हतियार प्रयोग गर्छन्। भर्खरै, संगठनहरूले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूको सामना गर्न वेब स्क्र्यापिंगलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न थाले। जे भए पनि, जब तपाईंसँग तपाईंको विरोधीहरू भन्दा बढी सान्दर्भिक जानकारी हुन्छ, तपाईं तिनीहरूमा एक लाभ हुनेछ। ज्ञान, तिनीहरू भन्छन्, शक्ति हो। जे होस् वेब स्क्र्यापि industry उद्योग असंख्य समाधानहरूले भरिएको छ, तिनीहरूलाई केवल categories कोटिहरूमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ, र ती हुन्:
तपाईंको आफ्नै डाटा एक्स्ट्र्यासन एप्लिकेसन वा सफ्टवेयर निर्माण गर्दै आफैलाई वा प्रोग्रामरहरू राखेर
तेस्रो-पार्टी वेब स्क्र्यापि services सेवाहरूको लागि जाँदै
एक जेनेरिक डाटा निकासी सफ्टवेयर खरीद गर्दै
सबै तीन समाधानहरूमा उनीहरूका फाइदाहरू र नोक्सानहरू छन्। यस बाहेक, कुनै पनि कम्पनीको लागि सब भन्दा उपयुक्त समाधान वर्ग व्यवसाय को वेब स्क्र्यापिंग आवश्यकतामा निर्भर हुन सक्छ।
हरेक अन्य टेक्नोलोजीले जस्तै, वेब स्क्र्यापिंग विकास र विकासको लागि जारी हुनेछ। त्यसो भए, यो लेख वेब स्क्र्यापिंग को भविष्यमा केन्द्रित छ। अगाडि जान अघि यो कुरा स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ कि वेब स्क्र्यापिंगको भविष्यको बारेमा यस लेखमा उठाइएको रायहरू केवल सट्टा र काल्पनिक सम्भावनाहरू हुन्। ध्यानमा राख्दै, यहाँ, वेब निष्कर्षणको भविष्य बिभिन्न दृष्टिकोणबाट हेराईन्छ।
कृत्रिम बुद्धि दृष्टिकोणबाट
कृत्रिम बुद्धिमत्ता जीवनको हरेक क्षेत्र मा प्रयोग भइरहेको हुनाले, यो प्रविधिको निकट भविष्यमा वेब स्क्र्यापिंगको लागि अत्यधिक प्रयोग हुनेछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। अर्को शब्दहरुमा, बुद्धिमान रोबोट वा मेशिनहरु निगरानी गर्न र विभिन्न कम्पनीहरु को लागी नियमित आधार मा डाटा स्क्रैप गर्न को लागी बनाईन्छ ।
निस्सन्देह, रोबोटहरू पहिले नै वेब स्क्र्यापि forको लागि प्रयोग भइरहेको छ, तर तिनीहरू मध्ये कुनैले पनि मानवीय हस्तक्षेप बिना लक्षित वेबसाइटहरूमा ठूला परिवर्तनहरू सम्हाल्न सक्दैन। उदाहरण को लागी, यदि एक लक्षित साइट को रूप लेआउट परिवर्तन भयो, अवस्थित वेब स्क्र्यापिंग उपकरण प्रयोगकर्ता लाई उपकरणको अलि थोरै चिह्न बिना साइट स्क्र्याप गर्न सक्षम हुँदैन। यो भविष्यको सुपर-बुद्धिमान वेब स्क्र्यापिंग रोबोटहरूको लागि समस्या हुनेछैन किनकि उनीहरूले आफ्नो विवेका प्रयोग गर्न सक्नेछन् वेबमा स्क्र्यापिंगको क्रममा कुनै लक्षित वा कुनै मानवीय हस्तक्षेपको साथ उनीहरूको लक्षित साइटहरूमा कुनै पनि परिमार्जन गर्न। तिनीहरू चाँडै नै सिर्जना हुनेछ यदि तिनीहरू पहिले नै सिर्जना गरिएको छैन।
सब भन्दा ठूलो वेब स्क्र्यापर गुगल हो किनकि यसको मुख्य व्यवसाय भनेको वेबसाइटहरू क्रल र स्क्र्याप गर्नु हो र यसले प्रत्येक होस्ट गरिएका वेबसाइटहरू र तिनीहरूका सबै लिंकहरू क्रल गर्दछ। यो निम्न छ कि गुगलले वेब स्क्र्यापिंग सेवाहरू प्रस्तुत गर्न सुरू गर्न सक्दछ। र यदि यो गर्छ भने यो सब भन्दा ठूलो र सबै भन्दा राम्रो वेब स्क्र्यापिंग कम्पनी हुनेछ किनकि यसले पहिले नै वेबलाई स्क्र्याप गर्छ। ग्राहकहरूले लक्षित वेब पृष्ठहरूका URL हरू मात्र सूचीबद्ध गर्नुपर्नेछ, र तिनीहरू Google बाट सबै सामग्री प्राप्त गर्दछन्। सबै पछि, सबै वेबसाइटहरूको सामग्री यसको अनुक्रमणिकाको डाटाबेसमा पहिले नै छ।
गुगललाई वेब स्क्र्यापि services सेवाहरू रेन्डर गर्न सुरू गर्नुको अर्को कारण यो हो कि यससँग मार्नको लागि कम वा कुनै थप प्रयासको आवश्यक पर्दैन। कम्पनी पहिले नै वेबसाइटहरू स्क्र्याप गरेर बाँच्दछ। हातमा आवश्यक डाटा सबै समयमा Google ले वेब स्क्र्यापिंग टर्नअराउन्ड समय प्रस्ताव गर्दछ कि अन्य सेवा प्रदायकहरू कहिले पनि मेल गर्न सक्षम हुँदैनन्।
Google ले कुनै अतिरिक्त प्रयासको साथ सेवा प्रस्ताव गर्न सक्षम हुने हुनाले, यसले प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू पनि प्रदान गर्न सक्दछ जुन अरू कुनै संगठनले मिल्दैन। जसरी कम्पनीले सर्च इन्जिन ईन्डस्ट्रीलाई कसरी नियन्त्रणमा लिएको छ, गुगलले अन्ततः वेब स्क्र्यापिping्ग क्षेत्र पनि लिन सक्दछ। नहुनु यसको पक्षमा राम्रो छ।
विश्लेषण र संगठन दृष्टिकोणबाट
जेसुकै महँगो भए पनि, खुट्टा नभएको मान्छेलाई जुत्ता बेकार हुन्छ। त्यसो भए, डाटा कमजोर विश्लेषण कौशलको साथ संस्थामा धेरै प्रयोग हुन सक्दैन। वास्तवमा, डाटा आफै त्यति आवश्यक छैन, यो तपाईं यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए, कम्पनीहरूले आफ्नो वेब स्क्र्यापिंग प्रयासलाई तीव्र बनाउने क्रममा, उनीहरूले अत्यधिक अनुभवी डेटा विश्लेषकहरू राख्ने वा उनीहरूका कर्मचारीहरूलाई डाटा संगठन, र डाटा विश्लेषणमा तालिम दिन थप स्रोतहरू खेर फाल्न पनि शुरू गर्दछन्।
उही डाटा दिईएको छ, केहि संगठनहरूले अरूको तुलनामा यसलाई अझ राम्रोसँग प्रयोग गर्ने छन्। यो केवल किनभने तिनीहरूसँग डेटा विश्लेषण क्षमताका मानिसहरू छन्। त्यसोभए, वेब स्क्र्यापि ofको भविष्यले निश्चित रूपमा डेटा संगठन र विश्लेषणको मागलाई असर गर्दछ।
धेरै अवस्थित वेब स्क्र्यापि tools उपकरणहरू अब प्रभावी नहुन सक्छ किनकि धेरै संगठनहरूले उनीहरूको वेबसाइटहरू खोल्न असम्भव बनाउनको लागि प्रयासहरू तीव्र गर्न जारी राख्नेछन्। त्यतिन्जेल, केवल कम्पनीहरूले तेस्रो पार्टी वेब स्क्र्यापिंग सेवाहरू प्रयोग गरिरहेछन् वा ती अत्यधिक परिष्कृत उपकरणहरू राखेका छन् अझै अन्य वेबसाइटहरूबाट डाटा स्क्र्याप गर्न सक्षम हुनेछन्।
निष्कर्षमा, संगठनहरूको लागि वेब स्क्र्यापिंगको भविष्यको लागि आफैंको स्थिति सुरु गर्न महत्त्वपूर्ण छ। केहि आवश्यक कदमहरू जुन तपाईले विचार गर्न चाहानुहुन्छ:
१. तपाईले आफ्नै कृत्रिम बुद्धिमताद्वारा चालित रोबोटहरूको विकासमा काम गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ जुन तपाइँको डेटा स्क्र्यापि needs आवश्यकताहरू अब प्रभावी रूपमा सम्हाल्नेछ।
२. तपाईले आफ्नो साइटलाई भत्काउन धेरै गाह्रो बनाउने दिशामा पनि तीब्र प्रयासहरू गर्नुपर्दछ। के हुन्छ यदि तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूसँग तपाईंको वेबसाइटमा सामग्रीमा सहज पहुँच छ जबकि तपाईं तिनीहरूको स्क्र्याप गर्न सक्नुहुन्न? याद गर्नुहोस्, तपाइँसँग तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू बारे अधिक जानकारी छ, उनीहरूलाई हराउने तपाईंको संभावना उच्च छ।
You. तपाईले आफ्नो डेटा संगठन र विश्लेषण कौशल सुधार गर्न गम्भीरतापूर्वक काम गर्न सुरु गर्नुपर्दछ। यसलाई युद्धको अवस्थासँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ। कहिलेकाँही, तपाइँ तपाइँको प्रतिस्पर्धी वा विरोधी को कोडेड जानकारी मा ठेस लाग्न सक्छ। यदि तपाईं यसलाई सकेसम्म छिटो डिकोड गर्न सक्नुहुन्न भने जानकारीको कुनै उपयोग हुने छैन। उच्च अनुभवी डेटा विश्लेषकहरू प्राय: सजीलो डाटामा निश्चित प्रवृत्तिहरू भेट्टाउँछन् जसले गर्दा तपाईंले उनीहरूको एक जोडी भाँडा लिन आवश्यक पर्दछ।
संक्षेप मा, ठूलो डाटा को अवधारणा र वेब निष्कर्षण को भविष्य को लागी तपाइँको संगठन को तयार गर्न को लागी तपाइँको व्यापार को दीर्घकालीन सफलता मा एक प्रमुख भूमिका खेल्नेछ।